Shirkadda Apple oo loo ganaaxay arrin in muddo ah lagu tuhmayay |
Shirkadda Apple oo loo ganaaxay arrin in muddo ah lagu tuhmayay
Shirkadda teknoljiyadda ee Apple ee laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa lagu ganaaxay lacag dhan 27 milyan oo doolar, kadib markii si bareer ah ay culyes u saartay noocyadii hore ee taleefoonadii ay soo saartay, arrintaas oo aysan ku wargelinin macaamiisheeda.
Ganaaxan ayaa shirkadda Appel waxaa saaray hey’adda Dowladda Faransiiska u qaabilsan kahortagga waxyaabaha been abuurka ah, waxaana ay sheegtay in macaamiisha iibsaday taleefoonadii hore ee Apple aanan lagu wargelinin in sidaas lagu sameynayo taleefoonadooda.
Sanadkii 2017, Apple ayaa xaqijisay in ay si bareer ah culeys saartay isticmaalka qaar kamid ah taleefoonadi hore ee ay shirkadda sameysay, waxaana ay intaa raacisay in sababta ay sidaas u sameysay ay tahay in la yareeyo isticmaalka mudada dheer ee taleefoonadii hore.
Apple ayaa markii ganaaxa la saaray kadib war qoraal ah oo ay soo saartay ku sheegtay in xal u helidda arrintaas ay isla meel dhigeen iyaga iyo Dowladda Faransiiska.
Maxay tahay sababta ay Apple u sameysay sidaas?
Dad badan oo macaamiil u ah Apple ayaa in muddo ah tuhmayay in shirkadda Apple ay si bareer ah u curiyaamisay isticmaalka taleefoonadii hore, waxaana dadkan ay sababta ku sheegeen inay tahay sidii ay suuq u heli lahaayeen taleefoonada cusub ee ay soo saarto Apple.
Sanadkii 2017-ka, shirkadda ayaa xaqijisay in ay curiyaamisay isticmaalka qaar kamid ah taleefoonadii hore, maadaama sida ay sheegtay ay duug noqdeen, balse uma aanay sheegin dadka in ay iibsadaan kuwa cusub ee ay soo saartay.
Apple ayaa sheegtay in awoodda beytariga taleefoonadi hore ay aad u yaraatay, taleefoonadana aysan ku shaqeyn karin maadaama ay duug noqdeen.
Shirkadda ayaa sidoo kale arrintan ku sababeysay in marka ay damacdo in barnaamij cusub ay ku shubto taleefoonadaas aysan u suurtagleynin beytariga awgii.
Arrintan ayay dad badan ogaadeen kadib markii qaar kamid ah macaamiisha isticmaala taleefoonadaas ay tijaabiyeen, haseyeeshee qaar ayaa markii ay badeleen beytariga waxaa u suurtagashay in uu markale si wanaagsan ugu shaqeeyo.
Maxay hay’adda Faransiiska tiri?
Hey’adda dalka Faransiiska ee ganaaxday Apple ayaa sheegtay in khaladka ugu weyn ee ay sameysay Apple ay tahay in aysan tallaabada ay qaaday ku wargelinin macaamiisheeda, ayna taleefoonadooda ku shubtay barnamaijyada iOS (10.2.1 iyo 11.2) taas oo keentay in uu culeys ku yimaado isticmaalka taleefonada.
Heshiis ay shirkadda la gaadhay hey’adda dalka Faransiiska ayaa lagu sheegay in Apple ay marka hore ogeysiis ku qoran luuqadda af Faransiiska siiso macaamiisheeda muddo bil kahor inta aanay tallaab qaadin, waxaana Apple lagu eedeeyay inay ku dhaqaaqday dembi aan loo meel-dayin.
Apple ayaa wali ku hawlan tallaabada ay culeyska ku saareyso taleefoonadii hore, waxaana taleefoonadaas kamid ah iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, iPhone SE, iPhone 7 ,7 Plus, iPhone 8 iyo kuwa kale o badan.
Taleefoonada ayaa la sheegay in culeys uu ku yimaado marka beytariga taleefoonka uu duug noqdo, waxaase dad qaar ay shegeen in Apple ay arrintan u sameysay, si ay suuq u helaan taleefoonada cusub ee ay soo saarto.
Inkastoo dalka Faransiiska uu tallaabo ka qaaday shirkadda, haddana waxaan la ogeyn waxa shirkadda ay ka yeeli doonta macaamiisha kale ee isticmaala taleefoonadeeda ee ku sugan dalalka kale ee caalamka.